I-Epsom elula ye-Crystal Spikes
Khulisa indebe ye-Epsom ye-crystal needle kwifriji yakho. Yakhawuleza, kulula, kwaye iphephile.
Ixesha elifunekayo: iiyure ezingama-3
I-Crystal Needle Ingredients
indebe okanye isitya esincinci
Kwikomityini okanye encinci, isitya esingqongileyo, xuba i-1/2 indebe ye-Epsom usawoti (i- magnesium sulfate ) ene-1/2 indebe yamanzi epompo ashushu (kushushu njengoko iya kuvela kwi-faucet).
Gxotha malunga nomzuzu ukuchitha i-epsom salts. Kuya kubakho ezinye iikristst ezingasuswa phantsi.
Beka indebe kwifriji. Isitya siya kugcwalisa i-crystals-like crystals kwisithuba seeyure ezintathu.
Musa ukusebenzisa amanzi abilayo ukulungiselela isisombululo sakho. Uza kufumana ama-crystals, kodwa aya kuba mnandi kwaye akaxhasi. Ubushushu bamanzi bunceda ukulawula ukuxinwa kwesisombululo.
Ukuba uthanda, unokubeka into encinane kwisebe yekombe ukwenza kube lula ukususa iikristali zakho, ezifana nekota okanye iplastiki yebhotile. Ngaphandle koko, qaphela ngokucophelela iziliti zekristal ezivela kwisisombululo ukuba unqwenela ukuzihlola okanye ukuzisindisa.
Musa ukusela i-crystal liquid. Ayinayo into enobuthi, kodwa akukuhle kuwe.
Igama le-crystal ekhulile kule projekthi i-epsomite. Iqukethe i-hydrated magnesium sulfate kunye ne-formula MgSO 4 · 7H 2 O. Amakristali afana nealiti e-orthorhomic njengetyuwa ye-Epsom, kodwa i-mineral ithatha ngokukhawuleza kwaye ilahlekelwe ngamanzi, ngoko itshintshe ngokukhawuleza kwisakhiwo esisodwa i hexahydrate.
I-Epsomite ifunyenwe kwiindonga zamakhalo. Iikristali nazo zikhula kwiindonga zam kunye neeplanga, malunga ne-fumaroles ye-volcanic, kwaye ngokungaqhelekanga njengama-sheets okanye imibhede ekuphumeni kwe-evaporation. Nangona iikristali ezikhulile kule projekthi ziinaliti okanye ii-spikes, ii-crystals nazo zenza ama-fibrous sheets kwimvelo. I-mineral ecocekileyo ayibalabala okanye imhlophe, kodwa ukungcola kunokuyinika imbala ebomvu, eluhlaza okanye eluhlaza.
Ifumana igama layo ngo-Epsom eSurrey, eNgilani, apho iqala ukuchazwa ngo-1806.
I-Epsom crystals zetyuwa kakhulu, kunye nobunzima be-Moh obuphakathi kwe-2.0 ukuya ku-2.5. Ngenxa yokuba ithambile kwaye ngenxa yokuba igxotha kwaye ivuselele kwakhona emoyeni, oku akuyona ikristal efanelekileyo yokulondolozwa. Ukuba ufuna ukugcina i-Epsom cristal cals, into ekhethekileyo kukuba uyishiye kwisisombululo samanzi. Emva kokuba ama-crystals ekhulile, tyikitya isitya ukuze kungabi namanzi amaninzi. Unako ukugcina i-crystals ngokuhamba kwesikhathi kwaye ubukele ukutshabalalisa nokuguqulwa.
I-Magnesium sulfate isetyenziswe kwezolimo nakwiyeza. Iibhuladi zingenakongezwa kumanzi njengama-salts okuhlamba okanye njengotyikityu lokunciphisa imisipha embi. Amakristali anokuxutyushwa kunye nomhlaba ukunceda ukuphucula umgangatho walo. Ityuwa ilungisa i-magnesium okanye i-sulphur deficiency kwaye isetyenziswa ngokubanzi kwiirusi, imithi ye-citrus, kunye nezityalo ezinobumba.
Funda indlela yokwenza i-tattoo engeyona inetyhefu Inkinobho
Umthetho we-King Lear '1: Uhlalutyo lweMidlalo yokuvula